Mamy Ralaivita - Wikipedia
Mamy Ralaivita dia mpihira sady mpamoronkira.
Fony izy 12 taona dia nanangana tarika, vokatry ny nofinofy niarahana tamin'ireo mpiray tam-po aminy sy ireo namany nandritra ny fialantsasatra indrindra indrindra. Tamin'izany fotoana izany no nitsanganan'ny tarika "Zanak'i Dada" (1974) ary maro amin'ireo hirany tamin'izany no naveriny amin'ny raki-kira navoakany amin'izao fotoana.
Maro ny mahatsiaro ny fandraisany anjara tao amin'ny Radio Televiziona Malagasy ka ny tapany voalohany dia niarahany tamin'ny tarika Mahaleo. Taty aoriana kely dia nihira irery izy ka namoaka ny "Avereno aminay", izay nahazo ny "lokan'ny Hira malagasy".
Nandray anjara tamin'ny fifaninana "Découverte Afrique" i Mamy Ralaivita ny taona 1983, ka nandrombahany ny amboara tamin'ny "Ratagnalahy". Maro ireo "hetsika momba ny hira afrikana" nandraisany anjara tamin'io vanim-potoana io.
Noho ny asa maha-mpitsabo azy anefa dia nisy fotoana niatoany kely teo amin'ny sehatry ny hira.
Ankehitriny dia tafaverina soa eo amin'ny tontolon'ny zava-kanto malagasy izy ka hamoaka rakikira atsy ho atsy. Hotronin'ny fianakaviany izy amin'izany katrok'asa izany ka misy ireo sangan'asany no nomeny hohirain'ireo zanany sy ny zanaky ny mpiray tam-po aminy.
Azo vangiana ny : http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=245502168 ahitana ny mombamomba azy sy hihainoana ny sombin-kirany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mamy_Ralaivita&oldid=798343"
Voaova farany tamin'ny 12 Febroary 2017 amin'ny 06:01 ity pejy ity.